Sayensị Ahịa ma ọ bụ Nka? | Martech Zone
Wednesday, September 18, 2013 Na Tọzdee, Septemba 17, 2013 Douglas Karr
Nke a bụ nnukwu ajụjụ na m kpebiri itinye ya ndị ọkachamara abụọ m maara na-arụ ọrụ na-eduga ngalaba ngalaba kwa ụbọchị. Bill Caskey nke Ọzụzụ Caskey bụ mba ghọtara ahịa ahịa na nchịkwa dị ka nke ọma dị ka Isaac Pellerin nke TinderBox - usoro ihe ngosi ire ere nke gbawara na uto. Ha abụọ bụ ndị ahịa!
Site na Isaac: Nkà nke Ahịa
Agara m ebe a na-eme egwu n’izu a ka m hụ Mumford na onsmụ ha ka ha mere ngosipụta siri ike. Guysmụ nwoke a na-eme otu egwu n'abalị ọ bụla n'abalị, soro otu ìgwè ahụ nwee otu ọmarịcha ahụ, ma jiri otu njakịrị ahụ, mana n'ụzọ ụfọdụ ha na-achịkwa ịrụ ọrụ n'ụzọ na-eme ka ndị na-ege ntị nwee mmetụta na nke a bụ n'ezie ọ kachasị mmasị ha na njem ahụ. Enwere akụkụ nke egwu egwu bụ sayensị dị mfe na mgbe ihe ndị ahụ gbakọtara na ebumnuche, ọ bụ nka.
Ekwenyere m na nke a metụtara ire ere. Ọ ghaghị ịdị ka nka ma ọ gbanye mgbọrọgwụ na sayensị, ihe m kpọrọ "Calculated Spontaneity". Ga-aghọta ndị na-ege gị ntị ma mara ebe ịga ebe ị na-anabata mkpa ha ka ị na-enweta nzaghachi n'oge usoro ịzụta.
Ihe dị iche na nka na sayensị bụ ebumnuche. E nwere ụfọdụ iwu sayensị na-achịkwa usoro ire ahịa. Dị ka ọnụọgụ olile anya ịchọrọ ịkpọ iji nweta ndị ga-atụgharị gaa na ohere, ma ọ bụ otu ị kwesịrị isi soro ụzọ mbata tupu ị jụọ oyi. Dị nnọọ ka ụwa nke na-agba gburugburu na mpaghara ya na -emepụta usoro ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, ihe ndị a ga-eme na enweghị agbanwe agbanwe iji mee ka igwe na-enweta ego na-agba.
Ezigbo onye na-ere ahịa ghọtara sayensị n’azụ omume ndị a. Otu ezigbo ndị ahịa na-ere ahịa maara otu esi eziga ozi na atụmanya ahụ n'ụzọ ọ na-adị ka ọ bụ ihe pụrụ iche. Ha maara ka esi leverage intel anakọtara na usoro sayensị iji mepụta ahụmịhe ịzụrụ ahaziri iche. Ya mere enwere ike ibuli ahịa dị elu na ụdị nka (ọkachasị arụmọrụ) mgbe enwere ike ịghọta iwu sayensị nke na-achịkwa igwe ahịa gị ka e wee nwee ike webata ọrụ ọ bụla ga-eju anya ma nwee obi ụtọ na atụmanya gị.
Site na Bill: Sayensị Ahịa
Nnukwu ndị ahịa dị ka ndị ọgba ọsọ Olimpik: Ha na-agba ọsọ omume ọtụtụ kilomita tupu agba ọsọ ahụ. Ha anaghị apụ apụ ma zoo. Site na ụbọchị asọmpi, ha adịla njikere, n'uche na n'ụzọ anụ ahụ. Ọtụtụ mgbe, ndị na-ere ahịa anaghị ajụ ime ihe ndị dị mkpa iji nwee ọganiihu. Ọ bụ ya mere ntụgharị ọrụ ji dị elu. Sayensị nke ire ere na-akwado ịsọ mpi. Ihe nka a bu na nghota okike mmadu ka ino na egwuregwu.
Maka ụfọdụ ndụmọdụ ọkachamara mara mma na nyocha miri emi na ụfọdụ usoro nka na usoro mmụta sayensị kachasị baa uru, ịnwere ike ibudata ngwa ngwa ọhụụ Velocify - Na-agbagha nguzozi zuru oke n'etiti Art na Sayensị.
Tags: nkà nke ahịaNkwado ire ahịasayensị nke ahịa
Rick Roberge kwuru
Sep 18, 2013 na 1:38 PM
Onye obula nwere ike were agba agba ato wee mee nke abuo, ma o bu soso ihe nwere ike ime ka ha buru ezigbo ihe kwesiri ile anya ma dikwa nma, obu ezie na ufodu na-ewere ya dika ihe mara mma, ndi ozo apughi ihu ya.